Myagdi News - सञ्चार मन्त्रालयलाई गोकुल बास्कोटाको सुझाव : दारु शिविर चलाए हुन्छ - Myagdi News
आइतवार, असार १९ गते, २०७९
सञ्चार मन्त्रालयलाई गोकुल बास्कोटाको सुझाव : दारु शिविर चलाए हुन्छ
बुधवार, जेठ २५ गते	। म्याग्दी न्युज संवाददाता
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई घुम्ति शिविरलाई परिवर्तन गरी दारु शिविर चलाउन सुझाव दिनुभएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित वजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्व संचारमन्त्री समेत रहेका सांसद बास्कोटाले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।
‘सञ्चार मन्त्रालयको घुम्ती शिविर छ । बरु दारु शिविर राखे हुन्छ । प्रष्ट छ कुरा’ उहाँले थप्नुभयो, ‘के आखाँको घुम्ती शिविर रु स्वास्थ्य मन्त्रालयको भए पनि हुन्थ्यो । कानको ? के को निम्ति हो ? मैले केही पनि बुझ्न सकेको छैन ।’
अर्थ मन्त्रीले सरकारी कार्यालयका लागि सवारी खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छर, सञ्चार मन्त्रालयको विनियोजित वजेटमा भने मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्ने उल्लेख रहेको भन्दै उनले कुन चाहीँ झुट हो ?भनी प्रश्न गर्नुभएको छ । अनलाइनखबरबाट
धितोपत्र बजार तलमाथि हुनु स्वभाविक प्रक्रिया नै हो : अर्थमन्त्री शर्मा
७० वर्ष नाघेपछि चुनाव लड्न रोकौं : भट्टराई
किसानलाई धान रोप्ने चटारो (फोटो फिचर)
बेनी । म्याग्दीका किसान यतिबेला धान रोप्न व्यस्त छन् । हिलो र आलीमा किसान । कोही जोत्ने त, कोही हिलो–आली गर्न । हिलो मिलाउने सबै आफ्नै धुनमा । बीउ काढ्ने र धान…
अब सूचना विभागका सम्पूर्ण सेवा अनलाइनबाटै
काठमाडौं । सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा अब अनलाइनबाटै प्रदान गरिने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभागले प्रदान गर्ने बिआरएलएमएस, डिएमएस, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र…
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाउनुभएको छ । देउवाले मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी पदाधिकारी बैठक बोलाउनुभएको हो । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका एजेण्डा र पार्टीको आन्तरिक संरचना…
सफलले बदनाम गरे : चालिसे
काठमाडौँ । वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका सदस्य ओम प्रसाद चालिसेले अभियानबाट राजीनामा दिइसकेका युवराज सफलले आफुहरुलाई बदनाम गर्ने नियतले जथाभावी आरोप लगाएको बताउनुभएको छ । सफलले आइतबार बिहान गौतम…